रोयल्टीलाई सिस्टममा ल्याउन हामी आफैं सचेत हुनु पर्छ – Hotpati Media
रोयल्टीलाई सिस्टममा ल्याउन हामी आफैं सचेत हुनु पर्छ
८ आश्विन २०७६, बुधबार १२:४४ मा प्रकाशित (9 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ५ मिनेट
काठमाडौँ : सानैबाट नेपाली गीत संगीतमा रुची राख्ने गायक हुन्–रवि थापा मगर, लामो समय गायन यात्रामा देखिएका रवि केहि समय गीत संगीतबाटै हराए। गीतसंगीतबाट उनको पलायनको कारण थियो प्रोत्साहनको कमी, सांगीतिक वातावरण नभएको उनको घरमा उनलाई संगीतलाई लिएर हौसला दिन आफन्त खासै भएनन्। विवाह पछि भने यिनको नया जीवनसगै गायन यात्राको बाटो पनि फराकिलो बनेर आयो। श्रीमतीको हौसला र प्रेरणाका कारण पुनः सांगीतिक क्षेत्रमा आएका उनै गायक रवि थापा मगरसग गरेको कुराकानी :
१. केवल गीतको लागि गीत मात्रै आईरहेको अवस्थामा तपाईंले बिम्ब प्रतीक भएका सदावहार गीत गाउनुको कारण के हो ?
निस्चय पनि संख्यात्मक हिसाबले धेरै थरीका गीतहरु बजारमा आइरहेका छन्। सृजना आफैंमा राम्रो हुने भएकाले मलाई लाग्छ यो एक प्रकारले ठिक पनि हो। किनभने अडियन्सको रोजाइ पनि फरक फरक भएको हुँदा यसले ऊनीहरुको डिमान्डलाई केहि हदसम्म भएपनि पुरा गरेको छ र जहासम्म बिम्ब प्रतिक भएका गीतहरुको सवाल छ ‘प्राय मलाई यस्तै गीतहरु मन पर्छन्। अर्को कुरा कतिपय गीतहरु हाम्रो बास्तबिक जीवनशैली, घटना र परिवेशसग मेल खाने अनि हाम्रो प्रत्यक्ष जीवनसग सरोकार राख्ने र निर्देशित गर्ने खालको पनि हुन्छन्। त्यसैले म क्षणिक मनोरञ्जन दिएर हराउने गीत भन्दापनि सिम्बोलीक र अलि गम्भीर प्रकृतिका गीतहरुनै गाउन रुचाउछु।’ यस्ता गीतहरु गाउदा बेग्लै सन्तुष्टि मिल्छ र आफु सन्तुष्ट हुनुपनि ठुलो कुरा हो जस्तो लाग्छ।
२. तपाईंले सङ्गीतमा संख्या भन्दा गुणात्मक बाटोलाई रोज्नुभएको हो ?
अवस्य, किनकी संख्यात्मकलाई बढी जोड दिदा गुणात्मक मा ह्रास आउछ र जसलाई मेन्टेन गर्न सकिदैन। सङ्गीतमा पनि त्यस्तै हो। एउटा गायकले हजारौं गीतहरु गाएपनि उसलाई चिनाउने गीत भनेको १/२ वटानै हुन्छ। जुन गीतले श्रोता र दर्शकको मन जितेको हुन्छ। त्यसैले म पनि संख्यात्मक भन्दा गुणात्मकलाई बढी बिश्वास र प्राथमिकता दिन्छु । थोरै गरौं तर राम्रो र उत्कृष्ट गरौं भन्ने लाग्छ।
३. सङ्गीतलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ अनि कस्ता शैलीका गीतहरु बढी रुचाउनुहुन्छ ?
यो एउटा जटिल प्रश्न हो, सङ्गीतको परिभाषा प्रेत्यक मानिसको फरक हुन सक्छ। तर मेरो बुझाईमा ‘सङ्गीत खुला आकाशमा उड्ने एउटा पन्छी जस्तै हो, जस्को कुनै जात, धर्म, सिमा, बाधा र बन्देजहरु हुदैनन्।’ एउटा बच्चा रुन्छ, चराहरु कराउ“छन्, खोला नालाहरु कल कल गरेर बग्दछन्, बोट बिरुवाहरु हावामा नाचिरहेका हुन्छन्, यी पनि सबै सङ्गीत हुन्। जस्ले एउटा पृथक मेलोडी सृजना गरिरहेका हुन्छन्। सङ्गीत भित्री मनबाट निस्कन्छ र सङ्गीत हृदयको अभिव्यक्ति पनि हो। सङ्गीत बिना मानिस पशु सरह हुन्छ। जसरी एउटा स्वस्थ शरीरको लागि व्यायाम र पौस्टिक खानेकुराको आवश्यकता छ, त्यसरीनै स्वस्थ मनको लागि सङ्गीत पनि अनिवार्य छ। त्यसमाथि पनि अहिलेको ब्यस्त र तनावपुर्ण जीवनमा त सङ्गीतले ‘जीवन बुटी’ अर्थात औषधिको काम गरिरहेको छ भन्दा कुनै अत्युक्ति नहोला। त्यसैले सङ्गीत अहिले मानवजीवनको अभिन्न अङ्ग भईसकेको छ । हुन त गीत सुन्ने पनि एउटा समय र मुड हुन्छ। तापनि म एउटा सङ्गीत प्रेमी भएको नाताले फुर्सदमा दैनिक आधा एक घन्टा सबै खालका गीतहरु सुन्छु। किनभने सुनेर पनि धेरै कुराहरु जानिन्छ । म प्राय हाम्रो आफ्नै लोक भाकाका गीत अनि सुमधुर आधुनिक सेन्टिमेन्टल गीतहरु सुन्छु।
४. साङ्गीतिक योजनाहरू के के छन् ?
समय परिवर्तन शिल छ र कतिपय कुराहरु आफुले सोचें अनुरुप नहुन पनि सक्छ। त्यसैले भविष्यमा यहिनै गर्छु भन्ने कुनै ठोस योजना त छैन। तर समय, शरीर र स्वास्थ्यले साथ दिएसम्म अनि आफ्नो औकातले भ्याएसम्म सङ्गीत सृजनालाई निरन्तरता दिनेछु र नया नया साङ्गितिक कोसेलीहरु श्रोता दर्शक माझ ल्याउने कोशिस गर्नेछु।
५. संगीत रोयल्टीका विषयमा कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ?
बिस्तृत रुपमा त मलाई पनि त्यति जानकारी छैन। तर, मैले बुझे अनुसार सङ्गीत रोयल्टीको बारेमा नेपालमा भर्खरै मात्र कलाकारहरुलाई जानकारी हुदैछ। यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण बिषय हो।
६. रोयल्टीलाई सिस्टममा ल्याउन कस्ले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्ला ?
मलाई लाग्छ, रोयल्टीलाई सिस्टममा ल्याउन कलाकारहरु आफैं सजग भएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। कलाकारहरुको अभियानमा राज्यले पनि पुर्ण सहयोग र समर्थन गर्नु पर्दछ। किनभने सङ्गीत संविधानमा उल्लेख गरिए अनुसार यो बौद्धिक सम्पत्ति हो भनिएको छ । बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण र सम्बर्धन गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि हो।
भुवन चैत्य बसुन्धरा फाउण्डेशनले प्रदान गर्ने पुरस्कारको घोषणा